အစိုးရကို အလဲဗင်းမီဒီယာ ပြန်လည်တောင်းပန်
Than Htut Aung (R), CEO of the Eleven Media Group, and chief editor Wai Phyo are seen in handcuffs inapolice vehicle after appearing in court in Yangon on November 11, 2016. Than Htut Aung, the head of the major Myanmar media group, was detained on November 11 afteraminister sued him for writing an allegedly defamatory column about the politician and his ties to businessmen. / AFP PHOTO / ROMEO GACAD
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇
နိုဝင်ဘာလ ၆ရက်နေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲ တစ်နှစ်ကြာ သော် အယ်ဒီတာ့အာဘော် ရေးသားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစိုးရကို အလဲဗင်းမီဒီယာ(Eleven Media Group) က တောင်းပန်ကြောင်း ယနေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ တောင်းပန်စာတွင် “အယ်ဒီတာ့အာဘော်တွင် ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည့် အချက်အလက် အချို့သည်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်ပြီး မဟုတ်မမှန် အခြေအမြစ်မရှိ ဖော်ပြထားသော လွဲမှားသည့်အချက်အလက်များဖြစ််နေခြင်းအတွက်လည်း များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါသည်”ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းအပြင် ယခုလိုမှားယွင်းဖော်ခဲ့သည့်အတွက် ထိခိုက်နစ်နာမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် အဆိုပါ ရေးသားဖော်ပြချက်ကြောင့် တစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက်နစ်နာမှု ဖြစ်စေခဲ့သူအားလုံးကို Eleven Media Group ၏ CEO နှင့် Eleven Media Group မှတာဝန်ရှိသူများက နောက်နောင်တွင် ယင်းကဲ့သို့ မလုပ်ဆောင်ပါဟု ခံဝန်ချက်နှင့်အတူ အနူးအညွန့် တောင်းပန်အပ်ပါသည်ဟု ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
“ရွေးကောက်ပွဲတစ်နှစ်ကြာသော်” အယ်ဒီတာ့အာဘော်တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည့် ၀န်ကြီးချုပ်တစ်ဦးဝတ်ဆင်သည့် ဒေါ်လာတစ်သိန်းခန့် တန်ဖိုးရှိ Patek Phillipe နာရီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင်နှင့် အယ်ဒီတာချုပ် ဦးဝေဖြိုးတို့ကို အမှုဖွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းကဲ့သို့ အချက်အလက်မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြမိခြင်းကြောင့်ဟု တောင်းပန်လာခြင်းကို ကြိုဆိုသင့်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဘက်မှလည်း ပြန်လည်၍ဆီလျော်သည့် တုံ့ပြန်မှုမျိုးရှိသင့်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ (MPC ) မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုမြင့်ကျော်ကမှတ်ချက်ပြုပြောကြားသည်။
“ဒီတောင်းပန်မှုနဲ့ ဆီလျော်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုမျိုးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တယ် မီဒီယာအနေနဲ့ဒီလိုတောင်းပန်တယ်ဆိုတာ ကျင့်ဝတ်မှာပါတယ် မှားယွင်းတဲ့ဖော်ပြမှုမျိုးဆိုရင် ကျင့်ဝတ်အရ တောင်းပန်ဖို့ဝတ္တရားရှိတာပေါ့”ဟု ၄င်းကပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အမှုကိစ္စကို မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီအနေဖြင့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကြားဝင်ဖြေရှင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အသေးစိတ်ကိုတော့ ကောင်စီဘက်မှ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိဘူးဟု ၄င်းကဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ယင်းအမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရားလိုဘက်က ပိတ်သိမ်းပေးမည်ဆိုပါက ဥပဒေကြောင်းအရ ပိတ်သိမ်းပေးနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီအနေဖြင့် အဆိုပါအမှုကို ရုတ်သိမ်းပေးသင့်ကြောင်း ထင်မြင်မိသည်ဟု ကိုမြင့်ကျော်က သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်နှင့် ဦးဝေဖြိုးတို့ကို တာမွေမြို့နယ် မြို့မ ရဲစခန်းတွင် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမိုးဟိန်းက တရားလို အဖြစ် တရားစွဲဆိုထားသည်။
ယခင်ဆောင်းပါးလူကိုယားယံစေတက်သည့် ပိုးကောင်ဝါများကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်း နှိမ်နင်းမည်
နောက်ထပ်ဆောင်းပါး၆၆(ဃ)ကို ပြင်ဆင်ရမည့် အချက်များ လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ထားပြီဟု သူရဦးရွှေမန်းဆို